महिलाहरुले यी ४ कारण पटक्कै मन पराउदैनन् कण्डम – Sandesh Press
महिलाहरुले यी ४ कारण पटक्कै मन पराउदैनन् कण्डम
July 27, 2021 366
से’/क्स जहिले पनि सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि से’/क्स गर्नेले त विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । असुरक्षित से’/क्सका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा क’/ण्ड/मको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो’/नै सबैभन्दा सजिलो साधनको रुपमा पनि परिचित छ ।
सुरक्षित से/-क्सका लागि क’ण्ड/म भरपर्दो अ-स्थायी सा-धान मानिन्छ । जसले विभिन्न सं/क्र/म-णबाट समेत जोगाउन मद्धत गर्छ । तर, धेरै महिलाहरुलाई क’/ण्ड-मको प्रयोग मनपर्दैन । यसका मुख्य चार कारणहरु रहेका छन् ।
१.ए/लर्जी- धेरैजसो महिलाहरुका अनुसार क’ण्ड/म प्रयोग गरेर से’/क्स गर्दा महिलाहरुलाई ए/लर्जी हुनेगर्छ । उनीहरु क’ण्ड/मका कारण आफ्नो प्रा’-इ/भेट पा/र्टमा पो-‘ल्ने गरेको बताउने गर्छन् ।
२. चर/म आ/नन्दको कमी- केही युवतीहरुका अनुसार क’ण्ड/म लगाएर से’/क्स ग-र्दा च/म आन/न्द मिल्दैन । यसै कारण उनीहरुलाई से’/क्स पा’र्टन/रले क’/ण्ड/म लगाएको मन-पर्दैन । उनीहरुलाई ‘स्कि-‘न टु स्कि’न टच’ मनपर्छ ।
३. बा-सना- केही युवतीहरुले क-ण्ड/मको बास-नालाई लिएर आफ्नो पा’र्टन-रसँग वि’-वा/द गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई क’ण्ड-मको बा-सना मनपर्दैन । ४. फु/’ट्ने ड’र- से’/क्सको समयमा महिलाहरुलाई क-ण्ड/म फु’/ट्ने ड/’रले निकै स-ता’उने गर्छ ।
यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो से’/क्स आ–नन्द लिन सक्दैनन् । जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित यौ’/नस/म्पर्क गुर्नपर्छ । विभिन्न समस्या एवम रो’गहरुबाट सं-क्र’मण हुनुभन्दा सुरक्षित यौ/न आ-नन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ ।
Prevयी राशि हुनेका लागि चाँदी हुन्छ अत्यन्तै शुभ, हुनेछ धनको वर्षा!
Nextइन्द्रेणीमा गीत गाएर चर्चामा आएकी गायिका चन्दा अर्यालको बिहे गरेको केहि समय नबित्दै डिभोर्स भएपछि रुँदै आइन मिडियामा
बिहिबारका दिनमा जन्मेका मानिसको भाग्य कस्तो ? जानकारी लिनुहोस
ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु